केसीलाई यसरी तलार्दै लगिएको थियो विमानस्थलबाट ट्रमा सेन्टर(भिडियोसहित) – Health Post Nepal
२०७७ असोज ६ गते १४:२६
विगत ९ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि सुरक्षाका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ। सोमबार जुम्लाबाट नेपालगञ्ज ल्याइए पनि उनले भेरी अस्पतालको आईसीयूमा हुँदै उपचार गर्न मानेनन्।
न त उनले अनशन नै रोके। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अनशन जारी राख्ने अडान लिएपछि डा. केसीलाई मंगलबार बिहान ११ः २५ मा बुद्ध एयरको फ्लाइटबाट काठमाडौं ल्याइएको हो।
यहाँ आएपछि पनि महाराजगंजस्थित टिचिङ अस्पतालमा उनको रेखदेख हुने र उनले त्यही अनशन जारी राख्दे कार्यक्रम तय भएको थियो। सोही अनुसार करिब साढे १२ बजेतिर टिचिङ अस्पतालको एम्बुलेन्स त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेको थियो।
विमानबाट झरेलगत्तै सहयोगी पृतम सुवदीका साथ टिचिङ अस्पताल आउन एम्बुलेन्समा डा. केसी चढेका थिए। ९ दिनदेखि खानासमेत नखाएका केसीलाई एम्बुलेन्समा चढ्न र तल ओर्लिन पनि सहयोगी चाहिने भएको छ।
टिचिङ आउने तयारी गर्दै गर्दा अचानक प्रहरीको भ्यान पुग्यो। प्रहरीहरु भ्यानबाट ओर्लेर एकाएक गोविन्द केसी चढेको एम्बुलेन्सनजिक आए र केसीलाई ओर्लन आग्रह गरे। तर केसीले मानेनन्।
प्रहरी एम्बुलेन्सभित्रै पसेर हातमा लगाएको सलाइनसमेत तान्दै जबरजस्ती गरे। भिडियोमा उक्त दृश्य प्रस्टै देखिन्छ। साथै डा. केसीले पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार टिचिङमै जाने अडान लिए।
एक जना प्रहरी बाहिरबाट टिचिङमा कोरोना संक्रमणको जोखिम भएकाले लैजान नसकिने बताउँदै थिए, अर्का प्रहरी भने भित्र गोविन्द केसीको हात तान्दै थिए।
अनशनको प्रभावले कमजोर बनेका केसी लतारिन पुगे। एकछिन त प्रहरी र केसीबीच मुखामुख पनि भयो। तर, हात फुत्काउन खोजे पनि केसीले जवान प्रहरीको पञ्जाबाट उम्कन सकेनन्। अन्ततः लतार्दै प्रहरीले एम्बुलेन्सबाटै झारेरै छाडे।
त्यसपछि एकाएक प्रहरीले उनलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो। डा. केसीका सहयोगी पृतम सुवेदीका अनुसार आफूहरुलाई टिचिङमा पुगेपछि प्रशासनले केही रोकटोक गर्ने अनुमान भए पनि विमानस्थलमै अपहरणको शैली अपनाउनेबारे जानकारी नै थिएन।
स्रोतका अनुसार टिचिङमा बिहानैदेखि डा. केसीका समर्थहरु जम्मा भएका थिए। त्यहाँ नाराबाजीसँगै भीडभाड हुने देखेपछि पनि प्रहरीले कसैलाई थाहै नदिइ केसीलाई विमानस्थलबाट सिधै ट्रमा सेन्टर लगेको हो।